Article Archives - Kanaung News
ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့သူများ ပါရမီရှင်များ၊ ဘီလီယံနာကြီးများ၊ စိတ်ကူးကောင်းသူများက ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ နည်းပညာနဲ့ ကမ္ဘာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ နည်းပညာလက်နက်ကို ကိုင်စွဲပြီးတော့ တော်လှန်ရေးတစ်ရပ် ဆင်နွှဲကာ ကမ္ဘာကို ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အများနဲ့မတူ တစ်မူထူးပြီး ခပ်ကြောင်ကြောင်လူစားတွေလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တီထွင်ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေကတော့ အများနဲ့မတူတာကြောင့်လည်း ထင်ရှားလာခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ တီထွင်မှု သမိုင်းမှာ သူတို့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကို ပယ်ဖျက်လို့မရနိုင်လောက်အောင် ချန်ထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုတာ အလုပ်၊ စီးပွားရေး၊ ကြီးပွားရေးတွေနဲ့လည်း တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ပတ်သက်နေတတ်ပါ တယ်။ တကယ်တော့ သူတို့တီထွင်ခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်တို့က အလွယ်လေးသုံးနိုင်ကြပေမယ့် သူတို့ အားထုတ်ခဲ့ရတာတွေကတော့ ဘ၀နဲ့ရင်းခဲ့ကြရတာတွေ အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ သူများတွေ တွေးသလိုမတွေး၊ သူများတွေ နေသလိုမနေ၊ သူများတွေ ဇိမ်ခံသလို မခံတတ်ဘဲ ဘ၀မှာ […]
ဘ၀ကို ဆုတောင်းယူလို့ ရပါသလား ဆုတောင်းယူပြီးရတဲ့ ဘဝတွေနဲ့ ကံစီမံရာ ကျရတဲ့ဘဝတွေ ဘယ်လိုခြားနားကြောင်း ရှင်းပြပေးတော်မူပါ ဘုရား။ ဘယ်လိုသူမျိုးတွေဟာ ကံစီမံရာ(သုဂတိ၊ဒုဂတိ)ကျကြ၍ ဘယ်လိုသူမျိုးတွေဟာ မိမိအလိုရှိရာ ဘဝကို ဆုတောင်းရယူနိုင်ကြပါသလဲဘုရား။ ဗဟုသုတအလို့ငှာ သိလို၍ မေးလျှောက်ပါသည်ဘုရား။ ဘဝတဏှာကို ရှေ့တန်းတင်၍ မေးလျှောက်သည်ဟု မှတ်ယူတော် မမူပါနှင့်ဘုရား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ ခုမေးထားတဲ့မေးခွန်းက လွယ်မလိုရှိသော်လည်း စဉ်းစားဖြေရခက်နေတာမို့ ဒီမေးခွန်းကျမှပဲ ဦးဇင်းလည်း သင်ထားခဲ့သမျှ ဇာတ်တော်တွေကို အကုန်လိုက်ပြီး အာရုံပြုရတော့တယ်။ ဦးဇင်းဆီမှာကလည်း စာအုပ်က ကျမ်းရေးဖို့စာအုပ်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကလွဲရင် မရှိဘူးလေ။ မြန်မာပြည်မှာမှ မဟုတ်တာ။ အဲဒီတော့ သင်ထားသမျှ ဇာတ်တော်တွေကို လိုက်လံစစ်ဆေးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ ဆုတောင်းပြီးဘ၀ကိုရတဲ့ လူဆိုတာ သေချာပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နောက်ဘ၀မှာ နတ်ပြည်ကိုရောက်ရပါလို၏လို့ ဆုတောင်းပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်သော်လည်း နတ်ပြည်ကိုသေ ချာပေါက်မရောက်ဘဲ […]
နှစ်မိနစ်ဖြင့် ဘ၀အမောပြေစေမည့် နည်းလမ်းများ အရမ်းကို ပင်ပန်း နွမ်းနယ်နေ တယ်လို့ ခံစား နေရချိန် မျိုးမှာ ပင်ပန်းမှုနဲ့ မောပန်းမှု တွေ ကို ပြေပျောက် စေဖို့ အချိန် နှစ်မိနစ်နဲ့ သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းလေး တွေရှိ ပါတယ်။ အကြင်နာပေးပါ နှစ်မိနစ်လောက် နှုတ်ခမ်းချင်း အကြင်နာ ပေးတာဟာ တခြား နှာခေါင်း၊ လက်နဲ့ ပါးတွေကို အကြင်နာပေးတာ ထက် ပျော်ရွှင်မှုကို ပိုစေကာ ခံစားမှု ကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းထွက်လာပြီး၊ ၁၀ ကယ်လိုရီလောက် လောင် ကျွမ်း စေတယ် တယ်လို့ Stanford တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှု တွေ အရ ဆိုပါတယ်။ သာယာလှပသော ကားချပ်များကို ကြည့်ပါ ရေတံခွန်လို၊ စမ်းချောင်းလေးတွေ လို၊ […]
ကလေးတွေ ဘယ်အရွယ်မှာ ငွေအကြောင်း ဘယ်လောက် သိထားသင့်လဲ သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ ညွန်ကြားချက်အရ သူရဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ထိပ်တန်းအကြံပေးအဖွဲ့က ကလေးတွေ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောာက် သိထားသင့်တယ်၊ ဘယ်အရွယ်မှာ ငွေကို ဘယ်လို စသုံးသင့်တယ် ဆိုတာကို ၁၈ လကြာ သုတေသန လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ငွေကြောင့် မကောင်းတဲ့ အကျင့်စရိုက်ဆိုးတွေ မဖြစ်အောင် ငယ်စဉ်ကတည်းက တားမြစ်ဖို့၊ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးနှုန်းတွေနဲ့ လည်ပတ်ပုံကို တစ်ဦးချင်း သိရှိစေဖို့၊ နေ့စဉ် သွားတိုက်ရသလိုမျိုး နေ့စဉ် ငွေစုဆောင်းတတ်အောင် ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် စီးပွားရေး နာလည်ထဖို့နဲ့ ဗုန်းပေါလအော သုံးတတ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်ဖို့ သမ္မတက ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် […]
ဘာသာဝင်အားလုံးရဲ့ အဓိက Main က ဘာလဲ ?
ဘာသာဝင်အားလုံးရဲ့ အဓိက Main က ဘာလဲ ? ဦးဇင်းကို ဘာသာခြားများက လာလာမေးကြပါတယ်။ ဦးဇင်းအနေနဲ့ တခြားဘာသာတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်သလဲတဲ့။ ဒါနဲ့ ဦးဇင်းလည်း ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာပြန်ခံစားရမယ်။ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာပြန်ခံစားရမယ်။ ဒါဟာ အဓိကမိန်းဖြစ်ပေတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကောင်းတာလုပ်ဖို့နဲ့ ကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့သာ အဓိကဖြစ်တယ်လို့ လိုရင်းနဲ့ ဖြေပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ခုအခါမှတော့ အကျယ်တ၀င့် ဘာသာတိုင်းအတွက် အသုံးတည့်တဲ့အဖြေ ကို ဖြေပေးဖို့ရန် တောင်းဆိုသူတွေ များပြားလှတဲ့အတွက် အချိန်မရ၊ ပညာမတတ်၊ အသိပညာမကြွယ်ဝသော်လည်း တက်သိသမျှလေးကို ရသလောက်အချိန်လေးနဲ့ ဖြေဆိုပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာဝင်၊ ဘယ်ဘာသာမဲ့မဆို လိုက်နာကျင့်သုံးရမဲ့ အချက်က (၁၀)ချက်ရှိတယ်၊ မိမိမမြင်နိုင်သေးတာကို မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်း မိမိတို့မှာ ထောက်တည်ရာ(၄)မျိုးရှိတယ်။ အဲဒါတွေကိုသိရှိပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်ရန် လိုပါတယ်။ မိမိလိုက်နာကျင့်သုံး […]
မင်းကျင့်တရား ၁၀ ပါး နှင့် အဋ္ဌာရသ ၁၈ ရပ်
မင်းကျင့်တရား ၁၀ ပါး နှင့် အဋ္ဌာရသ ၁၈ ရပ် မင်းကျင့်တရားဆိုသည်မှာ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေသော မင်းများသည် သားတော်အစဉ် မြေးတော်အဆက် မြစ်တော်အညွန့် အဓွန့်ရှည်အောင် စိုးအုပ်ခွင့်ရရန် ပေးတဲ့အကြံဥာဏ်ကို ခေါ်ပါသည်။ မြန်မာမင်းတို့သည် သားစဉ်မြေးဆက် မင်းကျင့်တရား များကျင့်နိုင်ရန် မင်းကျင့်တရား (၁၀)ပါးကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ မင်းကျင့်တရား ၁၀ ပါးမှာ – ၁။ အလှူပေးခြင်း၊ (ဒါန) ၂။ ငါးပါးသီလ ဆောက်တည်ခြင်း၊ (သီလ) ၃။ ပေးကမ်း စွန့်ကြဲခြင်း၊ (ပရိစာဂ) ၄။ ဖြောင့်မတ်မှန်စွာကျင့်ခြင်း၊ (သမ္မာပဋိပန္န) ၅။ ကိုယ်နှုတ် နူးညံ သိမ်မွေ့ ခြင်း၊ (မုဒုက) ၆။ အခါအားလျှော်စွာ ရှစ်ပါးသီလစောင့်ခြင်း၊ (ဥပေါသထ) ၇။ အမျက်မထွက်ခြင်း၊ (အက္ကောဓ) […]